Religious portal paCatholic
Ndezvipi zvipo zvatinogamuchira pakubhabhatidzwa?
Category: taura nezvamwari 0
Tinowana zita ripi patinobhabhatidzwa? Tinofanira kubhabhatidzwa kuti tiregererwe zvitadzo zvedu. Mupositora Pita akarayira kuti: “Tendeukai, mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita.
Mubvunzo Unonyanya Kubvunzwa: Chii chinonzi Kesari muBhaibheri?
Chii chinonzi Kesari mubhaibheri? Izwi rekuti "caesar" ragara richishandiswa, munyika dzine tsika dzechiKristu, kuratidza simba renguva (kusiyana nesimba ...
Wakabvunza kuti: Kuchinja kworudzidziso kwakanga kuri sei?
Chii chinorehwa nokuchinja kwechitendero? CHII CHINHU CHECHITENDERO… Kuchinja kwechiPurotesitendi—kana kuti, kungoti, Kuchinja—kunozivikanwa sesangano rechitendero chechiKristu rakatanga muGermany mu…
Mhinduro Yakanakisisa: Zvinorevei kunamata novena?
Shoko raMwari rinofanira kuziviswa sei? Novena inogadzirwa sei? Kunamata iyi novena unofanirwa kunamata zuva rega rega munamato wekutanga, munamato...
Mubvunzo: Mambo Sauro aive ani maererano neBhaibheri?
Ndiani akauraya Mambo Sauro wemuBhaibheri? Mambo akanga akuvara, achifunga kuti aizobatwa navaFiristia, akakumbira mutakuri wezvombo zvake kuti amuuraye, asi . . .
Chii chinonzi ruchiva muChechi yeRoma?
Bhaibheri rinotii nezveruchiva? Naizvozvo, kuchiva kunorangarirwa somuitiro wokutadza kana kuti wounzenza, sezvinoratidzirwa muBhaibheri mubhuku...
Ndiani mwari wechitendero chechinyakare cheChinese?
Chitendero chetsika chii? Zvitendero zvechivanhu zvakavakirwa pamutambo wakakomba wekutsinhana vapenyu nemadzitateguru avo uye…
Mabasa eChechi yeRoma ndeapi?
Basa reChechi yeRoma nderei? Mukati memabasa ayo matatu akakosha ndeaya: Dzidzisa, Tsvenesa neKutonga, izvo zvinoumba chikwata; nekuda kweizvi...
Chii chinonzi chivi chinouraya chaBan?
Ndiani Ban kubva ku7 zvivi zvinouraya? Ban (Nanatsu no Taizai) Vanorambidza Kugara Nhengo yeZvivi Zvinomwe Zvinouraya Mavambo Sango reFairy King of Shumba...
Mubvunzo: VaRoma vakatevedzera chiKristu sei?
Nei vaKristu vaitambudzwa nevaRoma? Chikonzero chinobvira zvikuru chokutambudzwa chakanga chiri, kudivi revaJudha, nhema dziri pachena dzokuti...
Mumharidzo dzake, akadzidzisa vafundisi kuti basa harisati riri kutuka, asi mutoo woruponeso, nokudaro Arcangelo Tadini akapesvedzera nenzira isina kunanga kukudziridzwa kwedzidziso yenzanga yeChechi yeKaturike.
Jesu akadurura chii pavaapostora?
Nzira yekukunda sei kuvava maererano neBhaibheri?
Chii chiri chokwadi chechitendero uye chii chiri mavambo acho?
Jesu akasarudza rini vaapostora 12?
Chii chakaitika kuna Judhasi pashure pokunge atengesa Jesu?
Wakabvunza kuti: Uswa hunorevei muBhaibheri?
Mhinduro Yakanakisisa: Bhaibheri rinotii nezvaModhekai?
© 2022 Mwari Asingagumi